DAAWO: Kenya Oo ku hor-kuftay Cadaaladda Aduunka, Go’aankeeda cusub, ka bixida Maxkamadda!!
October 9, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 1
NAIROBI(P-TIMES) – KENYA, ayaa ku hor kuftay Garsoorka caalamiga ah, markii ay soo saartay hadalo is burinaya iska daba imaanaya, haddana iyagu jawaab iskugu filan dhammaantoodna khuseeya sidii ay ku boobi lahayd qeyb kamid ah Badda Soomaaliya oo ay Nairobi doonaysay in ay mudo dheer qaadato, hadda waxaan eegaynaa maxkamadda Cadaaladda Aduunka go’aankeeda soo bxii doona 3 maalmood ka dib, Maxay Kenya u bilowday in ay uga hor tagto.
Kenya, shalay waxay soo saartay warsaxaafadeed ka kooban 4 bog yoolkiisa oo dhan ayaa ahaa.
In ay cadeyso in aysan aqbaleyn go’aanka kasoo socda maxkamadda cadaaladda, ee lagu diiday damaceeda ku wajahan Boobka iyo dhaca.
In ay sii og tahay in damacii ahaa KU QABSO ku qadi mayside socon waayay, dadkeeda u sii sheegto in ay is dajiyaan oo ay u diyaariso liqida qaraarka ay guuldaraddu leedahay, xisbiga Talada hayaana uu wajihi doono waji gabax weyn doorashada dhaw.
Bedelkeedan ay isku diyaariso ficilo ka dhan ah bulshada Soomaaliya ee rayidka ah, oo ay ku jiri karaan ganacsato, Qaxootiga Xeryaha ku jira iyo xataa siyaasiinta oo aysan kala reebi doonin.
Abaalgasho ay sheegtay in ay u gashay Soomaaliya, ciidamadeduna ku dhimanayaan sidii nabad loga dhalin lahaa dalka Soomaaliya, haayeeshee taasi bedelkeda wey ka indho qarsatay xaqiiqada ay ku joogaan ciidankeeda gudaha dalka.
Ka sokow afarta qodob ee uu xambaarsanaa warka Kenya kasoo yeeray, haddana qodob kale oo weyn waa in ay sii sheegto in aysan maxkamaddaba qeyb ka aheyn oo ay qaraar ka qaateen xili hore, taas oo ay kudurayaan in aysan fulin doonin go’aanka maxkamadda, si lamid ah sidii ay wadamo horey u sameeyeen, balse Nairobi waxay is ilowsiisay qodobo sharci ah oo ay ku kuftay, waana markii 2aad ee ay kufadeexowdo aduunyada horteeda.
Is weydiinta xagga sharciga ah ee kuwajahan Kenya ma ka bixi kartaa ee awoodda qasabka ah ee Maxkamadda ICJ ayaa eegaynaa.
ICJ waxay ku dhisan tahay Cahdiga guud QM, Cutubkiisa 14 aad, Farqadiisa 92,96, waana maxkamad calami ah oo dunida u dhaxaysa, majirto cid gaar ah oo u eexan karto.
Awood ayay u leedahay qaadida dhammaan dacwadaha u dhaxeeya dawladdaha kamid ah Qaramada Midowbay ee dunida kajira, waana 3 qaab oo kale ah Dowlado u baahan in ay ku heshiiyaan in ay dacwoodaan “Special Agreement”. Waana Dowladaha aan xubinka ka ahayn Qaramada Midoobay sida ay sameeyeen Switzerland 1948 ka hor inta aysan ku biirin QM iyo Naruru 1988.
Dowlado Aqbalay mar hore in ay u Hoggaasamayaan Dacwad kasta oo ka dhalato “Pre-earlier commitment..Birii Eerli”. Waxana inta badan lagu qoraa heshiisyada caalamiga ah in waxii murun ka yimaado ay gali doonto ICJ waana sababta Iiraan ay uga adkaatay USA heshiiskii “Heshiiskii 1955-tii”.
Dowlado qasab ay ku tahay in ay u Hoggaansamaan “Cadeyn mutadawacnimo ah”. waana Dowladaha Nidaamka saxiixay oo ay ku jiraan Kenya iyo Soomaaliya, waxaana arintaa xusayo Q. 94/1-aad ee Cahdiga QM ” United Nation Charter”.